खाली पेटमा के के खानेकुरा खान हुँदैन ? थाहा पाउनुस – Rapti Khabar
घरभित्रै पाइने ११ औषधि
घरमा कुनै दुर्घटना वा स्वास्थ्य समस्या आइलाग्ना साथ तत्काल अस्पताल वा डाक्टरकोमा पुग्ने सम्भावना हुदैन ।
यस्तो अवस्थामा हाम्रो आसपासमा पाइने जडिबुटिबाटै उपचार गर्न सकिन्छ । आज हामी सामान्य चोटदेखि पोलेका समस्या घरभित्रै उपचार गर्न सकिने उपाय बारे जानकारी दिदैछौं ।
एन्टीबायोटिक गुण भएको तुलसीको कुनै साइडइफेक्ट हुँदैन । यसको सेवनबाट रुघाखोकी, निमोनिया निको हुन्छ । तुलसी सेवनको फाइदै फाइदा छ । कुनै हानी छैन ।
बेसार आफैमा एन्टिसेप्टिक र एन्टि व्याक्टेरियाजन्य तत्व भएइकाले यसलाई काटेको, जलेको घाउमा यसको प्रयोग गर्दा लाभ मिल्दछ । बेसारले मुटु रोग र क्यान्सरबाट बचाउँछ ।
एन्टिभाइरस र एन्टिव्याक्टेरियलयुक्त लसुनले चिसो, ज्वरो र फ्लुबाट जोगाउँछ । लसुनको नियमति सेवनले आन्तरिक संक्रमणबाट बचाउँछ । यसको अनगीन्ती फाइदाहरु छन् ।
४. एलोभेरा (घिउकुमारी)
शरीरको छाला जलेमा वा पोलेको घाउँमा घिउकुमारी औषधिको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । पोलेको ठाउँमा यसको रस लगाउँदा चिसो र शितलता प्रदान गर्छ ।
५. बिटर एलोभेरा (तितो घिउकुमारी)
तितो घिउकुमारी कब्जियत, एपेन्डिसाईटिस र पित्तासयको रोगको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ । शरीरमा भएका विषादि हटाउन समेत यसको सेवन गर्न सकिन्छ ।
पेटलाई हल्का बनाउनुका साथै बान्ता आउने समस्याको समाधानमा अदुवा उपयोगी हुन्छ । राती एक कप अदुवा चिया खाँदा पाचन पक्रियालाई सहज बनाउछ ।
जलेको छालामा प्याज दल्दा छालामा आराम मिल्छ । काँचो प्याज खाँदा छालामा चमक आउँछ । प्याजले विभिन्न संक्रमण र रोगहरुबाट बचाउँछ ।
श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगबाट बचाउनुका साथै हींगले पाचनक्रिया मजबुत बनाउछ । यसले रोघाखोकी लाग्नबाट पनि बचाउछ । दाँत दुखाईमा समेत हींग उपयोगी हुन्छ ।
जाइफल घोटेर दूधमा मिसाई पिउनाले निद्रा लाग्दछ । तर, एक चौथाईभन्दा बढि भएमा हानिकारक हुन्छ । जीउ दुखेमा, नपुंसकता एवम् शीघ्रपतनमा पनि जाइफल उपयोगी हुन्छ ।
ल्वाङले प्राकृतिक पेनकिलरको काम गर्दछ । दाँत दुखाई देखि जोर्नीमा हुने दुखाई, सुन्निने जस्ता समस्यामा पनि ल्वाङ फाइदाजनक हुन्छ ।
रुघाखोकी, घाँटी खसखस भए, भोक नलागे, बान्ता भए, अपच हुने आदि समस्यामा सुकुमेल सेवनले लाभ पुर्याउँछ । ज्वरो आएर जीउ पोलेको छ भने सुकुमेल खानाले सहज हुन्छ ।
चिकित्सकका अनुसार एक वयस्क मानिस अधिकतम ८ घण्टासम्म मात्र निदाउँदा पर्याप्त हुन्छ । सुत्ने समय बेलुका हुनु पर्ने उनीहरुको सुझाव हुन्छ । तर कोरोना संक्रमणकालमा जारी लकडाउन र निषेधाज्ञाका क्रममा घरभित्रै हुनु पर्दा धेरै मानिस आवश्यकता भन्दा बढि निदाउने गर्दछन् । अहिले अधिकाशं मानिस राति अबेरसम्म ननिदाउने र बिहान अबेरसम्म वा दिउँसो पनि सुत्ने गर्दछन् […]